Ixesha Sebenzisa - Mobhax
Xa lokhangelo website yethu uyavuma Imigomo yethu yokusebenzisa
Usebenzisa website yethu engozini yakho. Ukusetyenziswa kwe umxholo wethu kwenziwa ngokwengqiqo zakho kunye nomngcipheko kwaye nokuba uya kuba kuphela noxanduva nawuphi na umonakalo kwindlela yakho khompyutha okanye ukulahleka data esisiphumo ukusetyenziswa saneliseke. ukuqonda ukuba website yethu akanaxanduva nawuphi na umonakalo ngqo okanye ngandlela yimbi.
Akukho namnye umxholo thaca kwisayithi yethu isingathwa kwiiseva zethu.
Thina akuqinisekanga uxanduva kumntu wesithathu edityaniswe okanye ekhankanywe kwi website yethu.
Awuvumelekanga ukuba lokumxelisa okanye nokulayisha bethu naphi apho. Uyakwazi ukusebenzisa kuphela ukuba ukusetyenziswa lobuqu non-commercial. Kusenokwenzeka ukuba uphendule okanye de-ukuqulunqa nasiphi na isiqulatho yethu ngayo nangayiphi na indlela. Le khontenti inikwa injongo zemfundo kuphela.
Akukho lothunyelo umxholo kwi website yethu. Zonke izenzo zakho kwenziwa ngokwengqiqo yakho.
umxholo wethu umsebenzisi-odalwe idaliwe ukulungiselela iinjongo zemfundo non-ezorhwebo kunye non-nzuzo.
Awuvumelekanga ukuba basebenzise umxholo zethu iiseva ezisemthethweni yesevisi yabo yokusebenzisa. Wena uthathe uxanduva olupheleleyo ngokwenza njalo.
Kusenokwenzeka ukusebenzisa nayiphi na kule website ngayo umxholo ngaphandle kwemvume evela umlawuli. Ukuba wenza usebenzisa isiqulatho website yethu ngaphandle kwemvume yomphathi, uya kuba noxanduva lokuhlawulela umonakalo obangelwe ngokulisebenzisa.
Yonke iposi guest ezingenisiweyo okanye umsebenzi uya kuba impahla yethu yezomthetho. Uya kuphulukana onke amalungelo inqaku. Sinelungelo lokuba emva kokuba isithuba nangayiphi na indlela ngaphandle kwesaziso.
Le blog wadalwa injongo zemfundo kuphela.
Akukho fayile hosed ku mncedisi engakhethwanga kwaye kakhulu ukuzilawula kubo.
Zonke uphawu copyright ezinabanini bazo abohlukileyo.
Lo admin unelungelo lokuba emva okubhalwe kule ngxelo ngalo naliphi na ixesha, ngokubona kwethu.